Tababare Zidane oo ka jawaabay in kooxdiisu ay u sacbinayso Barcelona kulanka Camp Nou haddii ay ku guulaysato La Liga – Gool FM
Tababare Zidane oo ka jawaabay in kooxdiisu ay u sacbinayso Barcelona kulanka Camp Nou haddii ay ku guulaysato La Liga
Liibaan Fantastic April 7, 2018
(Madrid) 07 Abriil 2018 Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa ka hadlay muranka ka taagan in ciyaartoydiisu ay u sacbinayaan kuwa Barcelona kulanka horyaalka ee ka dhici doona Camp Nou.
Haddii kulanka El-Clasico la gaaro iyada oo Barcelona ay hogaanka La Liga ku hayso 9-dhibic waxay ka dhigan tahay inay ku guulaysatay horyaalka.
Sidaas darteed, waxaa waajib ah in ciyaartoyda Real Madrid ay marin sharafeed u sameeyaan kuwa Barcelona maadaama ay ku guulaysteen horyaalka isaga oo aan idlaan.
Tababare Zidane ayaa si wayn uga horyimid in kooxdiisu ay marin sharafeed u samayso Barcelona, wuxuuna sheegay inay horay u diideen inay u sameeyaan kooxdiisa kulankii hore ee ka dhacay Bernabeu markaas oo Real ay soo qaaday koobka kooxaha adduunka.
Ka hor kulanka Derby Madrid ayaa la waydiiyay tababare Zidane in kooxdiisu ay marin sharafeed u samaynayso Barcelona kulanka Camp Nou? wuxuuna ku jawaabay:
“Ma samaynayno taas, waxaan xooga saaraynaa kulanka barri, waxaan isku dayaynaa sidii aan ku heli lahayn 3-da dhibic, laakiin ma samaynayno marin sharafeed waana go’aankeyga”.
“Haddii marin sharafeedku uu yahay dhaqan mudan in la dhawro, Barcelona ayaa horay u burburisay”.
Guardiola oo hadal calaacal ah laga hayo kahor kulanka caawa ee uu ka horimanayo Mourinho
AS ROMA VS FIORENTINA: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!